मानव मस्तिष्कका अचम्म लाग्ने तथ्यहरू यस्ता छन्, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
मानव मस्तिष्क शरीरको सबैभन्दा संवेदनशीलसंगै जटिल अंग हो । संसारमा हुने हरेक गतिविधि तथा प्रक्रियाहरु यहि अंगसँग जोडिन आउँछ । शरीरका हरेक गतिविधि चलाउने, अवलोकन गर्ने, सन्देशहरु सञ्चित गरि मुल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्मका काम मस्तिष्कले गर्छ । तर यति हुँदा हुदै पनि मस्तिष्कसंग सम्बन्धित केही तथ्यहरु अचम्म लाग्दा छन् । ती हुन् :
१. मस्तिष्क मानव शरीरको मुख्य स्नायुप्रणालीलाई सुचारु गर्छ । यो स्नायु प्रणाली सञ्चालन गर्ने केन्द्र हो तर यो आफैमा भने स्नायु तन्तु होईन । यसैकारण मस्तिष्क आफ्नो दुखाई नै अनुभव गर्न सक्दैन् ।
२. पुरा शरीरको दुई प्रतिशत मात्रै तौल भएको मस्तिष्कले शरीर सञ्चालन गर्न चाहिने शक्तिको २० प्रतिशत शक्ति खपत गर्छ ।
३. मस्तिष्कमा हुने स्नायु कोशिकाको संख्या करीव १सय विलियन छ । जुन संसारको जनसंख्या भन्दा करीब १५ गुणा बढी हो ।
४. मस्तिष्क शरीरको सबैभन्दा बढी चिल्लो पदार्थ ( बोसो ) भएको अंग हो । मस्तिष्कको करीब ६० प्रतिशत भाग चिल्लो पदार्थले बनेको हुन्छ ।
५. गर्भावस्थाको सुरुको बेला स्नायु कोशिकाको बृद्धिदर २ लाख ५० हजार प्रति मिनेटका दरले हुन्छ ।
६. मस्तिष्कले काम गर्दा चाहिने शक्तिले करीब २५ वाटको एउटा बल्ब बाल्न काफी हुन्छ ।
७. हरेक मानव मस्तिष्कमा हरेक दिन करीब ७० हजार विचार खेल्छन् ।
८. सन् २०१५ सम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट सुपर कम्प्युटरले पनि मस्तिष्कले एक सेकेण्डमा गर्ने कामलाई करीब चालिस मिनेट लगाएको बैज्ञानिकहरु बताउछन्।
९. हरेक चोटी कुनै नयाँ मेमोरी बन्दा स्नायु कोशिकाबीच नयाँ सम्वन्ध बनेको हुन्छ । र यसले हरेक चोटी मस्तिष्कको संरचना परिवर्तन गरिदिन्छ ।
१०. मस्तिष्कको विकास करीब ५० बर्षको उमेरसम्म हुनेगर्छ ।
व्यस्तताका कारण कतिपय मानिसहरु खाना समयमा नखाने र अस्वस्थ खाना खाने गरिरहेका हुन्छन् । जसले शरीर मात्र होइन दिमाग पनि कमजोर बनाउँछ । बिहान खाने विहानदेखि लिएर रातिको खानासम्म स्वस्थ खान जरुरी हुन्छ ।
विहान खाली पेट बस्दा तपाईंको दिमागले काम गर्न सक्दैन र त्यसपछि धेरै खाना खाँदा दिमागमा उल्झन पैदा हुन्छ । जसले गर्दा तपाईं दिनभरी राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्न ।
तपाईंले देख्नुभएको होला प्रायः मानिसहरु आजभोलि कानमा ईयरफोन र हेडसेट लगाएर गीत सुनिरहको हुन्छन् । तर लामो समयसम्म ईयरफोनको प्रयोग गर्दा कानसँगसँगै ब्रेन टिशुजको पनि नोक्सान पुर्याउँछ । लगातार यसो गर्दा अल्जाइमरको समस्या हुन्छ।
धेरै मान्छेले जिन्दगीमा दोहोयाउने गल्ती हो यो । अरुले ‘राम्रो’ भन्दा मख्ख पर्ने र ‘नराम्रो’ भनेपछि खिस्रिक्क हुने प्रायः को बानी हुन्छ । यही गल्तीले मान्छेलाई निरन्तर पछारिरहेको हुन्छ । सधैँ अरुले हौसला प्रदान गर्दैनन् र सबै आफ्ना अनुकूल हुँदैनन् ।
मान्छे ठीकठाक अवस्थामा छ भने ऊ परिवर्तनदेखि डराउँछ । यथास्थितिमै रमाउन वातावरण सिर्जना गर्न थाल्छ । जसले गर्दा दिमागमा नयाँ सोच सिर्जना हुँदैन । परिस्थितिको परिबर्तनलाई अवसरको नयाँ दैलो ठान्नेहरु मात्रै यो दुनियाँमा तेज बुद्धि भएकामध्ये परेका छन् ।
सफलताको माथिल्लो सिँढीमा उनीहरु नै पुगेका छन् । मान्छेको दिमाग परिवर्तनलाई सदा स्वागत गर्छ । तर, समयसँगै आफूलाई बदल्न चाहन्छ । हामी यथास्थितिमा राख्न खोज्छौँ, जसले गर्दा बुद्धिको विकासमा असर पुयाउँछ । परिवर्तनसँग डराउने होइन, डटेर सामना गर्ने विचारले दिमाग बढाउँछ ।
सामूहिक रोग हो, अर्काको प्रगतिमा जल्ने । आफ्नो सफलता भन्दा अर्काको असफलतामा रम्ने बानीले अन्ततःः दिमाग नै त्यही रुपमा बदलिन्छ । नकारात्मक कुरालाई महत्व दिने ग्रन्थी दिमागबाट चाँडो निस्किन थाल्छन् ।
अन्तमा गएर आफ्नो सफलताका लागि भन्दा अर्काको असफलताका लागि दिमाग चल्छ । आफू अघि बढ्ने समय अर्काको खुट्टा तान्न खर्चिंदा कहिल्यै सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। अर्काको सफलतामा समेत रमाउने स्वभावको विकास गर्दा आफ्नो सफलताका लागि सोच्ने शक्तिको विकास हुन्छ ।
आफ्नो तुलना अर्काे कोहीसँग गर्नुहुँदैन । किनकि जन्मिने वातावरण, समय र अवस्था नै फरक भएपछि कुनै कुरामा समानता हुने सम्भावनै हुँदैन । आफूलाई अरुसँग दाँज्ने बानीले कहिल्यै बुद्धिको विकास हुन दिँदैन । आफू अरुभन्दा फरक हो र हुनुपर्छ भन्ने सोचाइले अन्ततः फरक बनाएरै छाड्छ ।
Don't Miss it मुटुकाे लागी कालाे चिया कति फाइदाजनक छ ? जान्नुहाेस्
Up Next सुन्दर जीवनका लागी प्रेरक भनाइहरू